Nzira yekuita Shefler musango? Handizokuudza kubva paInternet! Zvakakosha kudyara mbeu yako kamwe chete, spray 1 kamwe pazuva, uye saka zuva nezuva, mvura shoma, inofanira kumira ...
Mazano ekuchengetwa kwekambani yekunze ndaive nechepamhiti yakadai, ini ndichakuudza pasina kutaura neIndaneti, inokura zvakanaka, inoda kunwisa muzhizha, usingavige marimu, munguva yechando inodonha mamwe mashizha mu ...
Ndeupi ivhu rinodiwa kuKalanchoe? Ivhu reKalanchoe harisi zvekutakura kana zvishoma acidic (pH 5,5-6,5). Zvirimwa zvinokura zvakanaka muzviitiko zvinowanzosanganiswa zvezvinokonzera. Mbeu dzechidiki dzinoshandiswa kuva musanganiswa we4 zvikamu ...
Ndezvipi zvakakodzera kutarisira Muraya. Nemhaka yei maruva asina kukwana anowira pa 2's little Murayi? Ndakawana tsime rine buds muchemo. Uyewo pane imwe nzvimbo mu10, ona.Zvirevo zvevarimi vemaruva zvakanga zvisina kufanira - kwete kubuda ...
Ndapota ndiudze kana zvichibvira kushandisa mwenje ye ultraviolet yemiti yemukati? vanotenda vakadzidza, pamusoro peLF, uye kana zvichibvira kushandisa mwenje DNAT nokuda kwekuwedzera kuwedzera kwezvirimwa, zvakadai semamate, pepper, eggplants. Achishandisa UV ...
Nzira yekudyisa sei maruva phalaenopsis? Phalaenopsis - isinganzwisisiki yakasvibirira, inowedzera orchids; mhando dzavo uye mahombekombe anotsvaira zvese gore rose zvakakosha kune vanotanga. Nekuchengetedzwa kwakakodzera, Phalaenopsis yakawanda, inodururwa kwenguva refu ...
Ndiudzei chii chandingaita kana muchindwe ichisiya mazano akaoma ?? Pane mushonga unokosha here? Handizivi nezvekudiridza, asi seji rechina remichindwe rinowoneka, iro rokutanga rokutanga kuoma. Iva ne ...
Nzira yekuisa sei zvinotyisa? Ndinoda mirairo yakajeka yekutanga. Kusarudza hari. Iwe unofanirwa kusarudza ukuru uye chimiro chehari, zvichienderana nekukudziridza kwemuitiro wehupenyu hwemarudzi ecactus wauri ku ...
Zvinokwanisika kutema muti wemari here? Matavi ane simba zvikuru ... anonamatira pasi ... uye achiputsa ...
Mibvunzo ye69 mu database yakagadzirwa mu 0,508 masekondi.